China Rotary karazana paosy fonosana famokarana sy ny orinasa | tampon
Mora ny miasa, mandray PLC mandroso avy any Siemens Alemana, vady miaraka amin'ny efijery sy rafitra fanaraha-maso herinaratra, ny interface amin'ny masinina dia milay.
■ Mora ny miasa, maka PLC mandroso avy any Siemens Alemana, vady miaraka amin'ny efijery sy ny rafitra fanaraha-maso herinaratra, ny interface amin'ny masinina dia milay.
■ Ny fanovana matetika dia manitsy ny hafainganana: ity milina ity dia mampiasa fitaovana fanovana matetika, azo ahitsy ao anatin'ny elanelam-potoana arakaraka ny filan'ny zava-misy amin'ny famokarana.
■ Fanamarinana mandeha ho azy: tsy misy paosy na paosy hadisoana misokatra, tsy feno, tsy misy tombo-kase. ny kitapo dia azo ampiasaina indray, fadio ny fandaniam-poana ny fonosana sy ny akora.
■ Fitaovana fiarovana: Miato ny tsindry amin'ny tsindry rivotra tsy ara-dalàna, fanairana fanaingoana heater.
■ Ny sakan'ny kitapo dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny motera elektrika. Ny fanindriana ny bokotra fanaraha-maso dia afaka manitsy ny sakan'ny clip, miasa mora foana, ary manangona fotoana.
■ Mifanaraka amin'ny vavahady fiarovana ny fitaratra. Tsy hiasa intsony ilay masinina rehefa manokatra varavarana ianao. Mba hahafahany miaro ny fiarovana ireo mpandraharaha. Mandritra izany fotoana izany dia afaka misoroka vovoka izy io.
■ Huff, afatory ny meatus an'ny kitapo rehefa apetaho ao anatiny ny tadin-drivotra, avy eo manosika hamoha tanteraka ilay kitapo hidina ao ambany mba hisorohana ny fihoaram-bika avy ao anaty kitapo raha tsy nosokafana tanteraka izy io.
■ Ampiasao ny plastika, tsy mila asiana menaka ianao, ahena ny fandotoana.
■ Aza mampiasa paompy mandrehitra solika, fadio ny fandotoana ny tontolo iainana amin'ny famokarana.
■ Ny fatiantoka entana ambany dia ambany, izay ampiasain'ny masininina ny kitapo efa niamboarana, ny lamin'ny kitapo dia tonga lafatra ary manana kalitao avo lenta amin'ny famehezana, io dia nanatsara ny famaritana ny vokatra.
■ Ny singa mifandray amin'ny kitapo vokatra na fonosana dia mandray vy vy na fitaovana hafa mifanaraka amin'ny fepetra ara-pahadiovana ara-tsakafo, miantoka ny fahadiovana sy ny filaminan'ny sakafo.
■ Miaraka amin'ny feeder samihafa dia novana ho fonosana, ranoka, ranoka matevina, vovoka sns.
■ Ny valizy kitapo fonosana ao anaty elanelam-be, mety amin'ny fitambaran-sosona maro, PE monolayer, PP ary toy izany koa ny kitapo Preformed vita amin'ny sarimihetsika sy taratasy.
Flat, paosy mitsangana, zipper
W: 100-210mm L: 100-350mm (mety ho fanaoized)
10-40paosy / min (Ny hafainganana dia miankina amin'ny satan'ny vokatra sy ny lanjan'ny famenoana)
380V 3phase 50HZ / 60HZ (mety ho 220v na 480v)
Atsofohy ny rivotra
0.6m3 / min (famatsian'ny mpampiasa)
2450 *1880 * 1900mm
1: Manome kitapo
2: Daty fanoratana
3: sokafy ny zipper
4: sokafy ny ambony sy ny ambany
7: fanidiana ny zipper ary famehezana
8: Mamorona sy mamoaka
Mpiaro mahery vaika / ambany
Relay mandeha amin'ny herinaratra
SWITCH PRESSURE DIGITAL
Teo aloha: Powder Auger Filler
Manaraka: Masinina famenoana & famonoana rano